Crafts na imegharị ihe onwunwe | Crafts Na
Crafts na emegharị ihe
Ọtụtụ mgbe, ọ naghị ejikọta ya nkà iji imeghari ihe eji eme ihe. Otú ọ dị, ụwa nke nkà na-aga aka na aka na imegharị ihe. A na-enweta ọtụtụ ọrụ aka site na imegharị ihe eji eme ihe dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, ihe eji eme ihe nke na-adịkarị mma maka ya mee nka, bụ ihe mkpọ efu. A na-etinye ha n'ọrụ imepụta pensụl ejiri, ite ifuru na ọrụ aka ndị ọzọ, nke na-enyekwa ịba uru n'ụlọ.
Enwere ike inye ihe ọzọ site na arịa plastik, dịka karama mmanya dị nro. Site na ụdị nkwakọ ngwaahịa a, anyị ga-eme ite, oriọna oriọna, ihe eji etinye akpa.
Akwụkwọ na kaadiboodu nwekwara uru abụọ, ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịbụ ihe ndabere maka ịme emegharịrị ihe, a na-eji ha enweta papier-mâché nke emebere na ihe nke na-eme ka ihe sie ike mgbe ọ na-ewusi ha ike.
N'ụzọ nke a, ọ ga-enwe ekele otú ụwa nke nkà, n'ụzọ magburu onwe ya jikọtara ụwa nke imegharị ihe maka iji ya eme ihe. N'ihi nke a, taa, anyị kpebiri ịnye mpaghara maka ọrụ ndị a ejikọtara, ebe enwere ike ịme ka ha abụọ dịkwuo mma, na mgbakwunye na ịbụ nnukwu ebumnobi iji wepu ihe sitere na usoro okike nke, ka oge na-aga, ọ ga-abụ ihe mkpofu siri ike nke biodegrade.
Ozi ndị ọzọ - Ichegharị akpa
Isi mmalite - Crafts
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts na emegharị ihe
Crafts na okpu okpu
Crafts na akwa ákwà